HomeAfaan OromooMagaalota Oromiyaa hedduu keessatti hiriirri mormii ajjeechaa balaaleffatu bahame
Muddee 3, 2018 (BBC Afaan Oromoo) — Hirirri mormii ajjeechaa poolisoota Oromiyaa naannoo Daangaa Beenishaangul Gumzitti raawwatame balaaleffatu fi ajjeechaan Oromoota irra gahaa jiru akka dhaabatu gaafatu magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti itti fufeera.
Naannoo Daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumzitti haleellaa fi walitti bu’iinsa ji’oota dura dhalateen namootni hedduun du’anii kumootan kan lakkaawaman qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’aniiru.
Daangaa Beenishaangul Gumuzitti ‘guyyaa tokko qofa Poolisoonni Oromiyaa 10 ajjeefaman’
Torban darbe magaalota akka Naqamtee, Shaambuu, Najjoo, Gimbii, Amboo fi kanneen biroo hedduu keessatti hirirri mormii bahame ajjeechaani fi buqqa’iinsi Oromootarratti xiyyeeffate akka dhaabatu gaafateera.
Hara’as maagaalota akka Amboo fi Gimbii keessatti hiriirri si’a lammaffaaf adeemsifamaa jira.
Jiraataan magaalaa Gimbii bilbilaan BBC’tti dubbate, hiriirri har’aa harka caalu gadda ibsannaadha jechuun hima.
”Hiriira har’aan jiraattootni magaalitti huccuu gurraacha uffatanii, naannoo yaa’ii gullalleetti baala afatanii, ajjeeechaa lammiilee keenyarratti raawwatamaa jiruuf gadda isaanii ibsachaa jiru” jedha dargaggoon magaalittti dubbifne.
Yunivarsiitilee akka Haroomayaa fi Jimmaa dabalatee ammoo har’a yeroo duraaf hiriirri ajjeechaaan Oromoota irratti naannoolee daangaa maraan raawwatamaa jiru akka dhaabatu gaafatu gaaggeefameera.
Hiriira Magaala Robeetti gaggeefameen barattootni Yunivarsiitii fi jraattootni magaalitti hedduun dhimma babal’ina magaalaa Finfnnee fi qonnaan bultoota naannichaa dabalatee hooggansa naannoo sadarkaan jiru irratti komiileen hedduun ka’uu barsiisaan Yunivarsiitii Madda walaabuu hiriiricharratti argame BBC’tti himeera.
”Gaaffii ijoon ka’e garuu ajjeechaa Lixa Oromiyaarra gahaa jiruu fi Poolisoota Oromiyaa hidhannoo gahaa malee gara daangaattii ergamaniidha” jedha barsiisaan kun.
Magaalota hirirrii mormii itti dhagaahamaa oole hedduu keessattii miseensonni poolisii Oromiyaa qaama hiriirichaa akka ta’an jiraattootni dubbisne himaniiru.
Magaalota hedduu keessatti hiriirichi nagayaan gaaggeefamaa kan jiru ta’uus Lixa wallagaa, Muggiitti garuu qaamoleen nageenyaa namoota hiriira bahan irratti dhukaasaa akka turan dargaggoon magaalitti tokko BBC’tti himeera.
Walitti bu’iinsi sabaa Itoophiyaa ni yaaddessaa?
Dargaggoon kun hiriirichi ganama sa’a lamattii eeegaluu nutti himee, gaaffilee sana booda dhiyeessineef nuuf deebisuu hin dandeenye.
“Amma mana jala qaamoleen nagenyaa waan jiraniif haasa’uu hin danda’uu turaa natti deebi’aa” jedheera.
Koreen hojii raawwachiiftuu ODP torban darbe walgahii ariifachiisaa taa’ee ibsa baaseen rakkoo kana attatamaan furuuf hawaasa waliin ta’uun akka hojjetuufi ”namoota yakka kan duuba jiran boolla seenan seennee seera dura dhaabna” jedheera.
Manni maree nageenya biyyaalessaas Sambata darbe marii gaggeeseen booda ibsa baaseen rakkoo nageenyaa naannoo daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Guumzitti mudate furuuf waliigaltee naannoolee lameeniin rakkinicha furuuf mootummaan Federalaa gidduu akka galuu murtaa’eera jedheera.
Haaluma kanaan qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa gidduu galuun nageenya naannichatti deebisuun warreeen buqqa’aniis gara qee’ee isaaniitti akka deebi’an ni hojjetama jedheera.
kan kenyaa jenee calissaan wanumaa Ethiopia dhaf kenan nu dhorekachuu caleqabaan, kunnii sirrii motii. Oromon Ethiopia motii moo male? kana bodaa wadaa wan jedhammuu oromo dhan fudhatamuu dhabaachuu qabaa. Ummataa oromo sgalee dhowachuu (“ignor”) godhuun akkaa illaalechaa kenyaatii nama biyaa tokkoo addaan qodhu dha (“discrimination”) dha.
Oromon biyaa dhabaachu yoo barbaadee dhabaachudhaf enyuu issaa dhowaachuu hin danda’uu, addaa qoddunif, ummaataa oromo sagalee dhowachuun , Oromodhan Ethiopia digii jechuu dha. Kanaf yoo Ethiopian akka jiratuu yoo barebadaan Oromoo “ignor” godhuu hattaataaman akkaa dhabeedan jechuun barebaachissaa dha. Oromon/qeerroon oggotaa dabaraan irraa amaa bayee cimmaa dha. Kanaf ittii yaddaa!!!
Oromon off egenaa gochuuniss barebaachisaa dha, jequmessaa irraa off egaachuun garii fakkaataa. Garu wan hundaff off qophessuun barebachisaa dha, “state of emergency” dhaffiiss.